Bahrain: ‘Nanapoaka Sarom-bilany’ Hanohitra Ny Sekoly (Lahatsary) · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Marsa 2011 5:19 GMT
Ity lahatsoratra ity dia iray amin'ny tatitray manokana mikasika ny Hetsi-panoherana Bahrain 2011.
Sekoly Ambaratonga (ambony) faharoa maromaro no ‘nanapoaka sarom-bilany’ hihetsika hanohitra ny governemanta manerana an'i Bahrain tamin'ny Talata 1 Martsa. Ho fanohanana ireo mpanao fihetsiketsehana milasy ao amin'ny Fihodinana ao Pearl (Lulu) dia nivoaka ny sekoliny daholo teny anelanelan'ny andro fianarana, na lahy, na vavy, ka nanao filaharana teny ivelan'ny sekolin-dry zareo tao an-tanànan'i Isa , Hamad ary Jidhafs.
Ireo sekoly tao an-tanànan'i Isa dia nitodi-toha nankany amin'ny Ministeran'ny Fanabeazana hangataka ny fialàn'ny minisitra sy haneho ny hatezeran-dry zareo momba ny rafitra ‘mpampianatra mpirotraka an-tsitrapo’ izay napetraka rehefa nitokona ireo mpampianatra manohana ireo maritiora latsak'aina sy ireo mpanao fihetsiketsehana ao amin'ny Fihodinana ao Pearl.
@mShareeda noraketiko anaty lahatsary ry zareo http://yfrog.us/5hc0wz tao amin'ny Sekoly Ambonin'ny tanànan'i Isa!!!! #bahrain
*Potsero ny rohy mba hijerena ny lahatsary
Ity lahatsary ity dia maneho ny anaran'ireo sekoly nanatevin-daharana ny hetsika sy nanao filaharana nankany am-bavahadin'ny Ministeran'ny Fanabeazana. Nampakarin'ilay mpampiasa YouTube MMulti2.
Nirotsaka an-dalambe niaraka tamin'ny kitapony ireo mpianatra tao an-tanànan'i Hamad, miantso fanatsaharana ny politika fanomezana fizakana zom-pirenena ho an'ireo teratany vahiny, izay tena mivandravandra be any amin'ireo tanàna izay haingana be ny fanaraha-maso ny fangatahana tranom-panjakana homena ireo Arabo nomena zom-pirenena.
Nampakarin'ilay mpampiasa YouTube AloOoOy93
Bitsika maro no maneho fahasorenana amin'ny hetsik'ireo mpianatra ary miteny fa tokony ho ny fianarana no hifantohan’ izy ireo fa tsy izay hetsi-panoherana.
@Teema_K Fa dia inona loatra re no mitranga any an-tsekoly ankehitriny e!! Aiza ny Ministeran'ny Fanabeazana!! Mandra-pahoviana ny tsy firaharahiana!! Tokony hosaziana ireo mpampianatra ireo!
@Shirley_Riffa Andraikitry ny mpampianatra ny mitarika ny mpianatra hiaina anaty fandriampahalemana sy firindràna ary tsy mamafy fisarahana eo amin'ny fiarahamonina.
@RshRsho mpianatra tao “Al Had AlZaher” (ny tena anarany: Al-Ahd Al-Zaher) nandao ny sekoly mba hanao hetsika fanoherana! Iza no tompon'antoka amin'izao heloka bevava ara-panabeazana izao! #Bahrain http://bit.ly/dSutNB
Al-Ahd Al-Zaher Tovovavy Mpianatra Amin'ny Ambaratonga Faharoa milahatra mamonjy ny Ministeran'ny Fanabeazana ao an-tanànan'i Isa
Ao amin'io sekoly io ihany, tovovavy iray 17 taona no voalaza fa niady taminà mpitsabo mpanampy iray tao an-tsekoly. Ny tranonkala mpomba ny governemanta, Peace Bahrain, dia namoaka sary ahitàna ny ratra nahazo ilay tovovavy.
Oron'ny mpianatra iray mangana, tao amin'ny sekoly Ambaratonga Faharoa ho an-Jazavavy Al-Ahd Al-Zaher niady tamin'ny tao an-tsekoly
Sary nahazoana alàlana avy amin'ny tranonkala Peace Bahrain